'Special One'က 'Finished One' ဖြစ်တော့မှာလား မော်ရင်ဟို Mourinho
‘Special One’က ‘Finished One’ ဖြစ်တော့မှာလား မော်ရင်ဟို Mourinho
16 May 2018 . 5:12 PM
၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို မော်ရင်ဟို Mourinho စရောက်တဲ့အချိန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိနေဦးမှာပါ။ ”ကျွန်တော့်ကို မာနကြီးတဲ့သူ (Arrogant) တစ်ယောက်လို့ မခေါ်ပါနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ဥရောပဖလားရခဲ့တာကြောင့် Special One နည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်”။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မော်ရင်ဟိုဟာ ပေါ်တိုနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားရပြီးခါစ သူ့နာမည်ကလည်း ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားလာစ၊ လူကလည်း ခပ်ငယ်ငယ်ဆို တော့ လေလုံးကလည်း ခပ်ထွားထွားပေ့ါ။ ဒါပေမဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ သူပြောသလို Special One ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ ရယူပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးရာသီမှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်းအတွက် ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၊ အင်္ဂလန်လိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ဆိုရင်တော့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အမှတ်ပေးဖလားအပြင် လိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ Old Service တွေဖြစ်တဲ့ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger၊ ဖာဂူဆန် Ferguson တို့ လွှမ်းမိုးနေမှုကို အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်နီးပါး ကာလအတွင်း ဆုဖလား(၈)ခုရယူပြီး အသင်းသမိုင်း တစ်လျှောက် အောင်မြင်မှုအများဆုံး နည်းပြဖြစ်ခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတော့ အင်တာမီလန်ကို ရောက်တယ်။ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီမှာ စီးရီးအေ၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ကိုပါအီတာလီယာဖလားတို့ကို ရယူခဲ့ပြီး အသင်းသမိုင်း တစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖလား(၃)လုံးချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ရီးယဲလ်၊ ချယ်လ်ဆီး တစ်ကျော့ပြန်ခရီးတွေမှာလည်း ထိုက်သင့်တာထက် ပိုတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူခဲ့ပြီး Special One ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဆက်ထိန်းခဲ့တယ်။ မော်ရင်ဟိုရဲ့ Philosophy ၊ ပြောင်မြောက်တဲ့ နည်းဗျူဟာ( Tactical Prowess)၊ Game Management ၊ ပွဲအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး နည်းဗျူဟာ ပြောင်းလဲမှု(Adaptability to different situations) စတဲ့အချက်တွေက မော်ရင်ဟိုရဲ့ထင်ရှားတဲ့ အရည် အသွေးတွေပါပဲ။ ဖာဂူဆန် Ferguson ခေတ်လွန် အောင်မြင်မှုတွေဝေးကွာပြီး ပုံရိပ်ကျ ဆင်းနေတဲ့ မန်ယူအသင်းကို မော်ရင်ဟို ကိုင်တွယ်ခဲ့ချိန်မှာ မန်ယူပရိသတ်တွေက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး တစ်ကျော့ပြန်အောင်မြင်မှုတွေ ရဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ပေ့ါ။ရာသီအစမှာ ပေါ့ဘာ Pogba ကို ပရီးမီးယားလိဂ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ခေါ်၊ ဆွီဒင်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimovic ရောက်လာ၊ ဘာယီ Baily၊ မစ်ခီတာရီယန် Mkhitaryan တို့လို အရည်အသွေးမြင့် ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူအားဖြည့်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးရာသီမှာ မန်ယူအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်အဆင့်(၆)သာရခဲ့ပေမယ့် ယူရိုပါလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားရယူခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရာသီလုံးခြေစွမ်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အားရစရာမရှိခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်သံထွက်လာခဲ့ပေမယ့် ရာသီကုန်မှာ ဖလား(၂)လုံးရခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုက အဲဒီဝေဖန်သံတွေကို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး မော်ရင်ဟိုဟာ သူ့ နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် ပထမရာသီထက် ဒုတိယရာသီမှာ ပိုအောင်မြင်မှု ရယူလေ့ရှိသူအဖြစ် နာမည်ကျော်တာကြောင့် ဒုတိယရာသီမှာ ဘာတွေလုပ်ပြမလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီရာသီအစမှာလည်း မော်ရင်ဟိုက လူကာကူ Lukaku၊ မာတစ် Matic၊ ဆောင်းရာသီမှာ အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် Alexis Sánchez စတဲ့ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့် မန်ယူရဲ့ ကစားသမားစာရင်းက ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီရာသီမှာ မန်ယူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားတွေကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး အခုနောက်ဆုံး FA ဖလားတစ်လုံးသာ မျှော်လင့်စရာရှိပါတော့တယ်။ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ဒုတိယရာသီကလည်း စိတ်ပျက်စရာအတိ။ အဲဒါတွေထက် အဆိုးဆုံးက မန်ယူရဲ့ ခြေစွမ်းပဲ။ မန်ယူဆိုတာက အစဉ်အလာတစ်လျှောက်မှာ ဖြေဖျော်မှုပေးနိုင်တဲ့ကစားပုံ၊ Effective Attacking Style ၊ နောက်ဆုံးမိနစ်အထိ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတတ်တဲ့ Fighting Spirit ၊ Winning Mentality စတဲ့အချက်တွေနဲ့အတူ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့အသင်း။ ဒါပေမဲ့ မော်ရင်ဟိုလက်ထက်မှာ အဲဒီလို တိုက်စစ်အားသန်အသင်းကို ခံစစ်အသားပေးအသင်းအဖြစ် ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တယ်။ အရင်တုန်းက မော်ရင်ဟိုဆိုရင် Special One လို့ နာမည်ကြီးပေမယ့် အခုမော်ရင်ဟိုဆိုရင် ဘတ်စ်ကားကွက် သုံးတဲ့နည်းပြဆိုပြီး ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပက မန်ယူပရိသတ်တွေ ဝေဖန်နေကြပြီ။ မန်ယူရဲ့ အားသာချက်တွေကို ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ မန်စီးတီးက လွှဲပြောင်းရယူသွားပြီ၊ ဒီရာသီ ပရီးယားလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့အပြင် ဖြေဖျော်မှုပေးနိုင်တဲ့ ကစားပုံ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ တိုက်စစ် စတဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတွေကိုပါ ပြသနိုင်ခဲ့တယ်။
မန်စီးတီး-မန်ချက်စတာ ဒါဘီပွဲမှာ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေက မော်ရင်ဟိုကို “The Finished One” ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့ လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်ပဲ မော်ရင်ဟိုရဲ့ခေတ်ကုန်သွားပြီလားဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုဟာ နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် တစ်ရာသီကို အနည်းဆုံးဆုဖလားတစ်ခု ရယူခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းရှိပေမယ့် ဒီရာသီမှာ အဲဒီမှတ်တမ်း ကျိုးပျက်လောက်နိုင်မယ့်အနေအထားကို ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ တကယ်လို့သာ FA ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာသာ ချယ်လ်ဆီးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ့်ဆိုရင် မော်ရင်ဟိုအတွက် အကြီးအကျယ် သိက္ခာကျစရာ၊ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေအတွက် အကြီးအကျယ်လှောင်ပြောင်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိ့မ်ယ်။ မန်ယူတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ မော်ရင်ဟိုကို ဆက်ပြီး အခွင့်အရေးပေးဦးမှာပါပဲ။ မော်ရင်ဟိုကလည်း လာမယ့်ရာသီမှာ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့ နောက်ထပ် ငွေတွေ အများကြီး သုံးစွဲဦးမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မန်ယူပရိသတ်တွေ မြင်ချင်နေတဲ့ မန်ယူအသင်းပုံရိပ် အစစ်အမှန်ကို ပြန်ရဖို့၊ ဒါဘီပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးနဲ့ မဟာပြိုင်ဘက် ဂွါဒီယိုလာ ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့က မော်ရင်ဟို ကြိုးစားရတော့မှာပါ။ ‘Special One’ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နေရာမှာ ‘Finished One’ဆိုတဲ့ စိတ်ပျက်စရာဂုဏ်ပုဒ် အစားထိုးဝင်မလာဖို့ မော်ရင်ဟို သက်သေပြရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ . . .
‘Special One’က ‘Finished One’ ဖွဈတော့မှာလား မျောရငျဟို Mourinho
၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ ခယျြလျဆီးအသငျးကို မျောရငျဟို Mourinho စရောကျတဲ့အခြိနျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ မှာ ပွောခဲ့တဲ့စကားကို ပရိသတျတှေ မှတျမိနဦေးမှာပါ။ ”ကြှနျတေျာ့ကို မာနကွီးတဲ့သူ (Arrogant) တဈယောကျလို့ မချေါပါနဲ့။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောက ဥရောပဖလားရခဲ့တာကွောငျ့ Special One နညျးပွတဈယောကျဖွဈထိုကျတယျလို့တော့ ထငျပါတယျ”။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက မျောရငျဟိုဟာ ပျေါတိုနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလားရပွီးခါစ သူ့နာမညျကလညျး ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားလာစ၊ လူကလညျး ခပျငယျငယျဆို တော့ လလေုံးကလညျး ခပျထှားထှားပေ့ါ။ ဒါပမေဲ့ မျောရငျဟိုဟာ သူပွောသလို Special One ဂုဏျပုဒျနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ ရယူပွနိုငျခဲ့တယျ။ ပထမဆုံးရာသီမှာ ခယျြလျဆီး အသငျးအတှကျ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျဖလား၊ အင်ျဂလနျလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျဆိုရငျတော့ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အမှတျပေးဖလားအပွငျ လိဂျဖလားကို ရယူနိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ Old Service တှဖွေဈတဲ့ အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger၊ ဖာဂူဆနျ Ferguson တို့ လှမျးမိုးနမှေုကို အဆုံးသတျနိုငျခဲ့တယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျးကို ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ (၃)နှဈနီးပါး ကာလအတှငျး ဆုဖလား(၈)ခုရယူပွီး အသငျးသမိုငျး တဈလြှောကျ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး နညျးပွဖွဈခဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပွီးတော့ အငျတာမီလနျကို ရောကျတယျ။ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီမှာ စီးရီးအေ၊ ခနျြပီယံလိဂျ၊ ကိုပါအီတာလီယာဖလားတို့ကို ရယူခဲ့ပွီး အသငျးသမိုငျး တဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ဖလား(၃)လုံးခနျြပီယံဖွဈစခေဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ရီးယဲလျ၊ ခယျြလျဆီး တဈကြော့ပွနျခရီးတှမှောလညျး ထိုကျသငျ့တာထကျ ပိုတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ရယူခဲ့ပွီး Special One ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို ဆကျထိနျးခဲ့တယျ။ မျောရငျဟိုရဲ့ Philosophy ၊ ပွောငျမွောကျတဲ့ နညျးဗြူဟာ( tactical prowess)၊ Game Management ၊ ပှဲအခွအေနပေျေါ မူတညျပွီး နညျးဗြူဟာ ပွောငျးလဲမှု(adaptability to different situations) စတဲ့အခကျြတှကေ မျောရငျဟိုရဲ့ထငျရှားတဲ့ အရညျ အသှေးတှပေါပဲ။ ဖာဂူဆနျ Ferguson ခတျေလှနျ အောငျမွငျမှုတှဝေေးကှာပွီး ပုံရိပျကြ ဆငျးနတေဲ့ မနျယူအသငျးကို မျောရငျဟို ကိုငျတှယျခဲ့ခြိနျမှာ မနျယူပရိသတျတှကေ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ကွိုဆိုခဲ့ကွပွီး တဈကြော့ပွနျအောငျမွငျမှုတှေ ရဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ တဈပှတေ့ဈပိုကျနဲ့ပေ့ါ။ရာသီအစမှာ ပေါ့ဘာ Pogba ကို ပရီးမီးယားလိဂျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ချေါ၊ ဆှီဒငျဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimovic ရောကျလာ၊ ဘာယီ Baily၊ မဈခီတာရီယနျ Mkhitaryan တို့လို အရညျအသှေးမွငျ့ ကစားသမားတှကေို ချေါယူအားဖွညျ့ခဲ့တယျ။ ပထမဆုံးရာသီမှာ မနျယူအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျအဆငျ့(၆)သာရခဲ့ပမေယျ့ ယူရိုပါလိဂျ၊ လိဂျဖလားရယူခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ စိတျကနြေပျစရာဖွဈခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈရာသီလုံးခွစှေမျးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ အားရစရာမရှိခဲ့တာကွောငျ့ ဝဖေနျသံထှကျလာခဲ့ပမေယျ့ ရာသီကုနျမှာ ဖလား(၂)လုံးရခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုက အဲဒီဝဖေနျသံတှကေို ဖုံးလှမျးသှားခဲ့တယျ။ နောကျပွီး မျောရငျဟိုဟာ သူ့ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ ပထမရာသီထကျ ဒုတိယရာသီမှာ ပိုအောငျမွငျမှု ရယူလရှေိ့သူအဖွဈ နာမညျကြျောတာကွောငျ့ ဒုတိယရာသီမှာ ဘာတှလေုပျပွမလဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီရာသီအစမှာလညျး မျောရငျဟိုက လူကာကူ Lukaku၊ မာတဈ Matic၊ ဆောငျးရာသီမှာ အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ Alexis Sánchez စတဲ့ကစားသမားတှကေို ချေါယူခဲ့တာကွောငျ့ မနျယူရဲ့ ကစားသမားစာရငျးက ဆုဖလားတှကေို စိနျချေါလို့ရနိုငျတဲ့အနအေထားကို ရောကျလာခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျးပဲ ဒီရာသီမှာ မနျယူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ ခနျြပီယံလိဂျ၊ လိဂျဖလားတှကေို လကျလှတျခဲ့ရပွီး အခုနောကျဆုံး FA ဖလားတဈလုံးသာ မြှျောလငျ့စရာရှိပါတော့တယျ။ ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ခဲ့တဲ့ မျောရငျဟို ရဲ့ ဒုတိယရာသီကလညျး စိတျပကျြစရာအတိ။ အဲဒါတှထေကျ အဆိုးဆုံးက မနျယူရဲ့ ခွစှေမျးပဲ။ မနျယူဆိုတာက အစဉျအလာတဈလြှောကျမှာ ဖွဖြေျောမှုပေးနိုငျတဲ့ကစားပုံ၊ Effective Attacking Style ၊ နောကျဆုံးမိနဈအထိ အနိုငျမခံအရှုံးမပေးတတျတဲ့ Fighting Spirit ၊ Winning Mentality စတဲ့အခကျြတှနေဲ့အတူ နာမညျကြျောခဲ့တဲ့အသငျး။ ဒါပမေဲ့ မျောရငျဟိုလကျထကျမှာ အဲဒီလို တိုကျစဈအားသနျအသငျးကို ခံစဈအသားပေးအသငျးအဖွဈ ပွောငျးပွနျလှနျပဈလိုကျတယျ။ အရငျတုနျးက မျောရငျဟိုဆိုရငျ Special One လို့ နာမညျကွီးပမေယျ့ အခုမျောရငျဟိုဆိုရငျ ဘတျဈကားကှကျ သုံးတဲ့နညျးပွဆိုပွီး ပွညျတှငျးမှာသာမက ပွညျပက မနျယူပရိသတျတှေ ဝဖေနျနကွေပွီ။ မနျယူရဲ့ အားသာခကျြတှကေို ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ မနျစီးတီးက လှဲပွောငျးရယူသှားပွီ၊ ဒီရာသီ ပရီးယားလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးခဲ့တဲ့အပွငျ ဖွဖြေျောမှုပေးနိုငျတဲ့ ကစားပုံ၊ စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ တိုကျစဈ စတဲ့ အရညျအသှေးကောငျးတှကေိုပါ ပွသနိုငျခဲ့တယျ။
မနျစီးတီး-မနျခကျြစတာ ဒါဘီပှဲမှာ မနျစီးတီးပရိသတျတှကေ မျောရငျဟိုကို “The Finished One” ဆိုတဲ့စာတနျးနဲ့ လှောငျပွောငျခဲ့ကွတယျ။ တကယျပဲ မျောရငျဟိုရဲ့ခတျေကုနျသှားပွီလားဆိုတာကို မေးခှနျးထုတျရမယျ့အခြိနျလညျးဖွဈပါတယျ။ မျောရငျဟိုဟာ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ တဈရာသီကို အနညျးဆုံးဆုဖလားတဈခု ရယူခဲ့တဲ့မှတျတမျးကောငျးရှိပမေယျ့ ဒီရာသီမှာ အဲဒီမှတျတမျး ကြိုးပကျြလောကျနိုငျမယျ့အနအေထားကို ရငျဆိုငျနရေပွီ။ တကယျလို့သာ FA ဖလား ဗိုလျလုပှဲမှာသာ ခယျြလျဆီးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့မယျ့ဆိုရငျ မျောရငျဟိုအတှကျ အကွီးအကယျြ သိက်ခာကစြရာ၊ မနျစီးတီးပရိသတျတှအေတှကျ အကွီးအကယျြလှောငျပွောငျစရာတဈခုဖွဈသှားပါလိ့မျယျ။ မနျယူတာဝနျရှိသူတှကေတော့ မျောရငျဟိုကို ဆကျပွီး အခှငျ့အရေးပေးဦးမှာပါပဲ။ မျောရငျဟိုကလညျး လာမယျ့ရာသီမှာ ပွငျဆငျမှုတှလေုပျဖို့ နောကျထပျ ငှတှေေ အမြားကွီး သုံးစှဲဦးမှာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မနျယူပရိသတျတှေ မွငျခငျြနတေဲ့ မနျယူအသငျးပုံရိပျ အစဈအမှနျကို ပွနျရဖို့၊ ဒါဘီပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးနဲ့ မဟာပွိုငျဘကျ ဂှါဒီယိုလာ ကို ကြျောဖွတျဖို့က မျောရငျဟို ကွိုးစားရတော့မှာပါ။ ‘Special One’ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျနရောမှာ ‘Finished One’ဆိုတဲ့ စိတျပကျြစရာဂုဏျပုဒျ အစားထိုးဝငျမလာဖို့ မျောရငျဟို သကျသပွေရမယျ့ အခြိနျရောကျနပေါပွီ . . .